Madaxwaynaha Ximin iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay oo Beeniyay in maamulkiisu uu la shaqeeyo kooxaha Burcad-badeedda. – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2012 3:05 b 0
Cadaado, Nov, 10 -2012-Hogaamiyaha mamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicey oo waraysi siiyey barnaamijka ka hortaga Burcad-badeeda ee Daljir ayaa sheegay in maamkulkiisu dagaal adag oo dhanka Bariga ah la galay Burcad-badeedda.
?Hoggaaminaya maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay ?ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalay sidii deegaannada Hobyo iyo Xarar-dheere ay uga nadiifin lahayeen kooxaha burcadbadeeda Soomaalida.
Mr Tiicay, ayaa war been ah ku tilmaamay maamulkiisu inuu la shaqeeyo kooxaha burcad-badeeda, waxaana uu hadalkiisa raaciyay shaki inaysan ku jirin maamulkiisu inuu biriga kala dagaalamay kooxaha burcad-badeeda Soomaalida.
Hadalka Hogaamiyaha maamulka Ximan & Xeeb ayaa kusoo beegmay xili dhowaan lagu eedeeyey maamulkaasi inuu gabaad siiyo kooxaha Burcad-badeedda Soomaalida.